नेपाललाई मेडिकल हब बनाउन सकिने डा. महतोको विश्वास « रिपोर्टर्स नेपाल
नेपाललाई मेडिकल हब बनाउन सकिने डा. महतोको विश्वास
प्रकाशित मिति : 2019 December 28, 5:43 pm
अब नेपालीहरुले उपचारको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता नभएको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने,‘मानसिक र शारिरीक रुपमा पूर्ण तन्दुरुस्त बनाउन सक्छौं, नेपालीहरु उपचारको लागि अब विदेश जानुपर्दैन, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ महतोले प्रतिस्पर्धाको जमाना भएकाले चिकित्सा क्षेत्रमा लागेका एकआपसमा मिलेर जानुपर्ने समय आएको बताए।
महतोले भने, ‘सही रुपमा मिलेर जाने हो भने नेपाल उपचारका लागी हब बन्ने छ।’ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनका लागि आफू सदैव तत्पर रहेको पनि बताए। समिटमा नेपाल, भारत र चीनका चिकित्सा क्षेत्रमा लागेकाको धेरै उपस्थित थिए।